Ku biir / Isku dar / midowdo MKV Faylal ay ku Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > Beddelaan > Sida loo soo biir / Isku dar / midowdo MKV Faylal ay ku Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Hayso badan oo clips MKV oo doonaya inuu ku biiro qaybahan MKV gaar ah galay mid ka mid weyn? Halkan, si toos ah ayaan ku talin joiner ah MKV awood badan, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) , kaas oo awood kuu inay si fudud oo dhaqso ku biiro MKV wada xereeyo galay filim dhamaystiran oo aan wax dib-u-Deji. Ka dibna waxaad ku raaxaysan kartaa masterpiece ku computer, YouTube, Facebook, qalabka, xitaa disk DVD si toos ah iyadoo la kaashanayo this caqli joiner file MKV ah. Next, waxaana idin ​​tusin doonaa sida inuu ku biiro badan clips MKV mid arrintan tallaabo joiner MKV weyn talaabo.
Easy in la isticmaalo MKV Joiner: Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Si fudud wada midowdo videos MKV tayo waayi maayo.
Dooro ka saameynta kala guurka kala duwan oo ay ku darto inta u dhaxaysa goobaha / clips.
Si fudud sameeyo video ah Picture-in-Picture (hab kale si ay ugu biiraan files MKV). Wax dheeraad ah >>
Dhoofinta video cusub siyaabo kala duwan.
1. Import MKV files si joiner MKV this
Dajiyaan oo dhan clips MKV aad rabto in aad wada biiro. Si tan loo sameeyo, riix "Import" doorasho si dajiyaan aad files MKV deegaanka si ay album User ee, ama jiitaa sii jeedi, kuwaas oo files MKV bartilmaameed ka kombiyuutarka si album this app ee (Windows 8 taageeray).
2. Ku biir clips MKV
Si toos ah jiidi kuwaas files MKV daray ka album in Timeline ugu hooseysa mid mid. Fiiro gaar ah in aad leedahay si ay u diyaarin in Timeline sida waafaqsan nidaamka play ah. Hana jiidi mid file in file kale. Si fiican kuu diyaarin dhowr files MKV aan is dul saaran, waxaad samayn kartaa isticmaalka bar slider ay u guuraan files. Haddii u baahan tahay, waxaad riixi kartaa batoonka Play ee suuqa kala xiisaha leh ee ay u arkaan saameynta waqtiga dhabta ah.
3. Ku dar-guurka ee u dhexeeya MKV videos (optional)
Ku darista kala guurka oo u dhexeeya videos samayn kartaa video ciyaaro si habsami leh ka mid clip ku xiga. Si aad ku dari guurka, tag "guurka" tab. Markaas jiidi kala guurka la doonayo in waqtiga. Haddii aad rabto in aad ku darto kala guurka isla dhexeeya clips oo dhan, xaq u guji meel gaarka ah iyo dooran "waxay khuseeyaan dhammaan". Waxaad sidoo kale riixi kartaa "Random in All" si aynu add guurka software aan kala sooc lahayn.
4. dhoofinta dhamaystiran MKV video
Guji ee "Samee" button in ay doortaan mid ka mid ah hababka dhoofinta.
"Device" tab - raaxaysta abuurka video on qalab kala duwan sida iPhone, iPad, iPod, HTC, PSP, Madaxweyne Siilaanyo Oo iwm ah "Qaabka" tab - badbaadi video dhameystiran on your computer. Haddii aad rabto in aad u badbaadin in MKV ama qaabab kale, halkan, waxaad dooran kartaa waxa aad rabto. "YouTube" tab - wadaag abuurka video on YouTube, Facebook iyo Twitter ka. "DVD" tab - Guba abuurka video ay u DVD disk ah , ama file kasta DVD folder.